February | 2016 | နည်းပညာပျိုးခင်း
Policy Base Routing
February 21, 2016 February 21, 2016 Phyo Lwin CISCO, Routing
Routing Protocol အတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ unicast traffic flow ကို လိုသလို ပြုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် alternative routing protocol တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PBR ကို သုံးပြီး Configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ PBR က unicast traffic ကို routing protocol အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ကွဲပြားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ PBR can provide:
Routing based on interactive rather than batch traffic
Routing based on dedicated links
PBR route maps can be configured to do the following:
Allow or deny paths based on the identity ofaparticular end system, an application protocol, or the size of packets oracombination of these values.
Classify traffic based on extended access list criteria.
Set IP precedence bits.
Route packets to specific paths.
PBR enable လုပ်ထားတဲ့ interface ကနေ all ingress unicast traffic လာတယ်ဆိုရင် PBR ကနေ route map ကို applies လုပ်လိုက်တယ်။ engress traffic or multicast traffic ကို PBR က applied မလုပ်နိုင်ဘူး။
ဒီပုံထဲကအတိုင်း configure လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်။
R1 မှာ default route configure လုပ်ပြီး R2 ဆီကို point လုပ်ထားတယ်။
ပြီးရင် R2, R3, R4 and R5 ကို OSPF configure လုပ်လိုက်မယ်။ ပြီးရင် loopback0 and loopback1 ကိုလဲ OSPF ထဲကို ထည့်လိုက်မယ်။ အဲဒါတေွပြီးဘီဆိုရင် R1 ကနေ 5.5.5.5 or 55.55.55.55 ကို traceroute လုပ်လိုက်ရင် အောက်ကအတိုင်း တေွ့ရမယ်။
1 10.1.12.2 28 msec 12 msec4msec
2 10.1.24.4 28 msec 20 msec 24 msec
3 10.1.45.5 36 msec 36 msec 40 msec
Tracing the route to 55.55.55.55
1 10.1.12.2 12 msec 12 msec 8 msec
2 10.1.24.4 24 msec 16 msec 20 msec
3 10.1.45.5 24 msec 16 msec 40 msec
ကဲ PBR ကို သုံးပြီး 5.5.5.5 ဆီကို သွားဖို့အတွက် R3 ဘက်ကနေ ပတ်ပြီးသွားဖို့ configure လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
R2 မှာ အောက်ကအတိုင်း configure လုပ်လိုက်မယ်။
R2(config)#access-list 101 permit ip any host 5.5.5.5
R2(config)#route-map HOST5 permit 10
R2(config-route-map)#match ip address 101
R2(config-route-map)#set ip next-hop 10.1.23.3
R2(config-if)#ip policy route-map HOST5
ကဲပြီးဘီဆိုရင် စောစောကအတိုင်း R1 ကနေ 5.5.5.5 နဲ့ 55.55.55.55 ဆီကို traceroute လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
1 10.1.12.2 36 msec 12 msec 8 msec
2 10.1.23.3 32 msec 40 msec 40 msec
3 10.1.35.5 36 msec 44 msec 20 msec
1 10.1.12.2 8 msec 8 msec 8 msec
2 10.1.24.4 20 msec 24 msec 16 msec
3 10.1.45.5 32 msec 16 msec 36 msec
ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် R2 ဆီကို ရောက်လာတဲ့ Traffic က 5.5.5.5 ဆီကို သွားတဲ့ Traffic ဆိုရင် R3 ဘက်ကနေ ပို့ပေးတယ်။ တခြား traffic တွေဆိုရင်တော့ R4 ဘက်ကနေ ပို့ပေးတယ်။ ထပ်ပြီးစမ်းချင်ရင် R5 မှာ နောက်ထပ် IP Address တစ်ခု ထပ်ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်ရအောင်။
Tracing the route to 50.50.50.50
1 10.1.12.2 16 msec4msec 12 msec
2 10.1.24.4 16 msec 16 msec 20 msec
3 10.1.45.5 28 msec 16 msec 40 msec
How to check Ubuntu Version?
February 5, 2016 Phyo Lwin Ubuntu
Release version ကို သိချင်ရင်အောက်ကကွန်မန်းနဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
nexus@ENVY4:~$ lsb_release -r
ပိုပြီးတိတိကျကျသိချင်ရင် အောက်ကကွန်မန်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
nexus@ENVY4:~$ lsb_release -a
Description: Ubuntu 14.04.3 LTS
nexus@ENVY4:~$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_DESCRIPTION=”Ubuntu 14.04.3 LTS”
code name ကို သိချင်ရင် အောက်ကွန်မန်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
nexus@ENVY4:~$ lsb_release -c
Description ကိုပဲသိချင်ရင် အောက်ကကွန်မန်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
nexus@ENVY4:~$ lsb_release -d